Baiboly pejy 702 - Ny Baiboly
Voalohany < 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 Manaraka
1 Joany toko 3 (tohiny)
19Izany no hahafantarantsika fa avy amin'ny marina isika, sy hahazoantsika mampatoky ny fontsika eo anatrehan'Andriamanitra. 20Fa raha ny fontsika aza manameloka antsika, mainka fa Andriamanitra, izay lehibe noho ny fontsika, sady mahalala ny zavatra rehetra. 21Ry malala, raha tsy manameloka antsika ny fontsika, dia mahazo manatona an'Andriamanitra amin-toky isika. 22Ary na inona na inona angatahantsika dia ho azontsika, satria mitandrina ny didiny sy manao izay tsara eo imasony isika. 23Ary izao no didiny, dia ny hinoantsika an'i Jesoa-Kristy Zanany, sy ny hifankatiavantsika, araka ny didy nomeny antsika. 24Izay mitandrina ny didiny, dia mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao aminy; ary ny ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy, dia ny Fanahy izay nomeny antsika.
20Raha misy milaza azy ho tia an'Andriamanitra, nefa mankahala ny rahalahiny, dia mpandainga izy, satria, raha ny rahalahiny hitany aza tsy tiany, hataony ahoana no fitia an'Andriamanitra tsy hitany? 21Sady izao no didiny efa azontsika: izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa.
18Fantatsika fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy manota; fa miaro tena izay naterak'Andriamanitra, ka tsy mikasika azy ilay ratsy. 19Fantatsika fa avy amin' Andriamanitra isika, ary izao tontolo izao kosa mipetraka ao amin'ilay ratsy avokoa. 20Ary fantatsika fa tonga ny Zanak'Andriamanitra, ka nanome fahazavan-tsaina antsika, mba hahalalantsika an'Andriamanitra marina; ary ao amin'izany Andriamanitra marina izany isika; satria ao amin'i Jesoa-Kristy Zanany izay Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. 21Anaka, tandremo fandrao manompo sampy hianareo.
1Izaho anti-dahy, mamangy an'Itompokovavy voafidy sy ny zanany, izay tiako araka ny marina - ary tsy izaho ihany, fa izay rehetra mahalala ny marina koa, - 2noho ny fahamarinana izay mitoetra ao amintsika sy ho ao amintsika mandrakizay:
Pejy: Voalohany < 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 Manaraka